Deg Deg: Weerar qarax gaari ah oo lala eegtay huteel Naasahablood oo ku yaala Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDeg Deg: Weerar qarax gaari ah oo lala eegtay huteel Naasahablood oo ku yaala Muqdisho
June 25, 2016 Puntland Mirror Somalia, South-Central 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Gaari walxaha qarxa laga soo buuxshay ayaa goor dhoweyd waxaa lala eegtay albaabka hore Huteel Naasahablood ee magaalada Muqdisho.
Dhawaaqa qaraxa ayaa laga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho, caaismada Soomaaliya.
Warbaahinta maxaliga ah ee Muqdisho ayaa sheegtay qaraxa kadib in koox hubaysan ay gudaha u galeen huteelka.
Huteel Naasahablood ayaa ku yaala isgoyska KM4.
Wixii soo kordha deg deg baan idiin kusoo gudbinaynaa.
September 18, 2016 Qarax ismiidaamin ah oo lagu qaaday xarunta wasaaradda difaaca ee Muqdisho
Culimada Puntland oo nabad dhex dhigay ciidamada dowlada iyo maleeshiyada guddoomiyihii hore gobolka Bari
Washington-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa duqaymo is xig xiga ka fuliyay gudaha Soomaaliya dabayaaqadii asbuucii lasoo dhaafay, weerarka ayaa ka dhan ahaa maleeshiyada ISIS iyo maleeshiyada Al-Shabaab ee guadaha Soomaaliya, sida ay sheegeen milatariga Mareykanku. Duqaymaha [...]